राधा चौधरी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको कडा ट्वीट, गृह मन्त्रालयमा खैलाबैला::– Nepal's Digital Paper
राधा चौधरी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको कडा ट्वीट, गृह मन्त्रालयमा खैलाबैला
प्रकाशित मिति :सोमवार, फाल्गुन २८, २०७४ Monday, March 12th, 2018
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार कैलालीमा बोक्सी आरोपमा राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार ट्वीट गर्दै उक्त घटनामा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताएका छन् । राधाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कैलालीमा राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जो कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन सक्दैन र दिइनेछैन । राधाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले ट्वीट गरेका छन् ।
बोक्सी आरोपमा कुटपिटमा संलग्नहरुलाई उम्काउन एमालेबाटै निर्वाचित मेयर संलग्न भएको आरोप लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । यसैबीच, प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कैलाली अस्पतालमा भर्ना गरिएकी राधा चौधरीको उपचारमा चासो लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आइतबार चौधरीलाई अस्पतालमै भेट गरी उनको उपचारबारे चिकित्सकहरुसँग जानकारी लिएका हुन् । उनले घाइते चौधरीसँग पनि कुराकानी गरेका थिए । भेटपछि संचारकर्मीहरुसँग मुख्यमन्त्री भट्टले चौधरीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । आजै प्रदेश ७ का सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी पनि अस्पताल पुगेर चौधरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । कुटपिटबाट घाइते राधा चौधरीको अहिले सेती अञ्चल अस्पतालको सर्जिकल वार्डमा उपचार भइरहेको छ ।
कैलालीमा राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारवाहि गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न जो कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुन सक्दैन र दिइनेछैन । राधाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ र घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नेछ ।
— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) March 11, 2018
रवि लामिछाने प्रकरण : के हो सत्यतथ्य ? यस्तो भन्छ प्रेस काउन्सिल ! पुरा पढ्नुहोस
यसकारण सिंगापुर उडे प्रचण्ड ! पत्नीको उपचार बहाना मात्र, खुल्यो यस्तो रहस्य
एसईई परीक्षाको नतिजा आज (बुधबार) साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुने (यसरी हेर्नुस नतिजा)
खानेपानी संस्थानका निर्देशक भूपेन्द्र प्रसाद माथि २५ करोड घोटाला काण्ड ! छानविन शुरु
३३ किलो सुन प्रकरणमा नयाँ मोड ! आज प्रकाउ परेका अर्का सुन व्यवसायी विमल पोदार को हुन?